Edemede Ahmer Inam na Martech Zone |
Edemede site na Ahmer Inam
Ahmer Inam bụ onye isi AI maka Ọnụ ego nke EDGE, ụlọ ọrụ na -ahụ maka ọrụ dijitalụ na teknụzụ zuru ụwa ọnụ. Ọ bụ onye isi nchịkwa data na nchịkọta nwere ahụmịhe afọ 20+ na -eduga mgbanwe nhazi site na iji data, teknụzụ, sistemụ ozi, nyocha na ngwaahịa data.
Saturday, October 23, 2021 Fraịde, Ọktọba 22, 2021 Ahmer Inam
Ngwọta ndị AI kwadoro chọrọ nhazi data ka ọ dị irè. Na imepụta usoro data ndị ahụ juputara na nsogbu enweghị isi n'usoro n'usoro. Mmadụ niile na -ata ahụhụ site na ajọ mbunobi (ma ndị maara ihe na ndị amaghị ihe ọ bụla). Ajọ omume nwere ike were ụdị ọ bụla: mpaghara ala, asụsụ, mmekọrịta akụ na ụba, nwoke na nwanyị, na ịkpa ókè agbụrụ. A na-etinyekwa echiche ndị ahụ na-eme ihe n'usoro n'ime data, nke nwere ike ịkpata ngwaahịa AI nke na-adịgide adịgide ma na-ebuli elu. Ụlọ ọrụ chọrọ usoro dị mkpa iji belata